Uhlu lwami lokuzivocavoca umzimba
Lapho ngizizwa ngi-creaky, ngenza lezi.
Ukugijima endaweni. Qinisekisa ukuthi imilenze ihambisana nomzimba, ungavumeli amankonyane aphumele ngaphandle. Ukugijima endaweni kuyindlela esheshayo yokwandisa ukugeleza kwegazi kanye ne-oxygenation, ngakho-ke ngivame ukuqala ngalokhu (2-5min).
Ukujima. Ngoba ama-push up awumsebenzi omile kakhulu, onezidingo zamandla aphezulu futhi udla amandla amaningi, ngakho-ke kungcono ukuwenza engxenyeni yokuqala yeseshini. Zinhle ukufudumeza umzimba wakho, ngiyathanda ukuzenza ebusika, hhayi kakhulu ehlobo...
Ukwelula. Kuningi ukunyakaza okuncane ongakwenza ukuze usebenze kuzo zonke izingxenye zomzimba wakho. Phela umzimba unawo zonke izinhlobo zemisipha.
Lezo engizenzayo “zifana ne-yoga” kodwa angilandeli lutho ngokukhethekile (inombolo inombolo yezikhathi zonke izivivinyo ezenziwa ngazo, ubuncane noma ubuningi kuye ngokukhetha komuntu siqu):
Kusukela ekumeni, finyelela ezinyaweni zakho ngezandla zakho (ungacindezeli). (5-15)
Kusukela ekumeni, finyelela amadolo akho ngezandla zakho. (5-15)
Ngezandla zakho uphambane, izingalo zakho weluliwe futhi imilenze yakho squatting, wenze umbuthano ogcwele clockwise futhi counter-clockwise. (3-9)
Izandla ziwela ngemuva kwekhanda lakho, ngendlela yokuthi izindololwane zakho zinamathele kwesokudla sakho nezinhlangothi zesobunxele, shintsha umzimba wakho kuqala kwesokunxele bese kwesokudla. (5-15)
Izingalo ezinwetshiwe ezivundlile emaceleni akho, qinisa umzimba wakho kuqala kwesokunxele bese kwesokudla. (5-15)
Ngezandla zakho thinta amahlombe akho, kwesokunxele nakwesokudla, zungezisa izindololwane zakho ngokwewashi bese uphikisana nokuhamba kwewashi. (10-30)
Ukuqala ngezandla zakho emahlombe akho, welula izingalo zakho, eyodwa ngesikhathi bese uthinta ihlombe lakho futhi, ukushintshanisa kwesokunxele nakwesokudla. (10-30)
uncike ohlangothini olulodwa, welula umlenze wangaphandle ushelela isithende kuze kube yilapho unyawo lwakho lubheke phezulu. Umlenze wangaphakathi uthatha indawo eqondile, idolo licishe lithinte phansi futhi isithende siphakame phansi (ungacindezeli). (2-6)
Ukuzivocavoca okungezansi kufanele kwenziwe endaweni ethambile.
Idolo elilodwa lithinta phansi, izandla ziwela ngemva kwekhanda lakho, qinisa umzimba wakho ukuze indololwane isondele edolweni ithinta phansi, (ungacindezeli). (3-6)
I-Supine, nezandla ziwela ngemuva kwekhanda lakho, imilenze ishwabene, amadolo abheke phezulu, phakamisa umhlane wakho imizuzwana embalwa bese ubuyela emuva futhi (15-45).
Yenza ibhuloho elifanayo ngaphandle kokuthi ugcine umhlane wakho uphakanyisiwe isikhathi eside (okungenani imizuzwana eyi-10) (3-9).
Imilenze yeluliwe, sebenzisa indololwane eyodwa ukuncika ohlangothini olulodwa, nengalo ithatha indawo eqondile. Phakamisa izinqwaba zakho phezulu imizuzwana embalwa bese ubuyela phansi. (10-30)
Yenza okufanayo ngakolunye uhlangothi (ngale indololwane). (10-30)
Esikhundleni sokusebenzisa izindololwane manje wena intende yesandla esisodwa ukuze ume ohlangothini olulodwa, i-engeli phakathi kwengalo yakho nesifuba sakho kufanele icishe iqonde, ukuze wakhe uhlamvu "T". Hlala unganyakazi okungenani imizuzwana engama-30. (1-3)
yenza okufanayo ngakolunye uhlangothi (ngesinye intende yesandla). (1-3)
Uthambekele, sebenzisa zombili izindololwane zakho ukugcina isifuba sakho singaphezulu komhlaba, ikhanda libheke phambili. Phakamisa imilenze yakho phezulu, eyodwa ngesikhathi, uyigcine iqondile, ngokusemandleni akho, okungenani imizuzwana engama-30 (umlenze owodwa ngesikhathi). (10-30)
Ngokufanayo nowangaphambilini, kodwa esikhundleni sokugcina imilenze yeluliwe, yigcine igoqe ukuze ucishe ufinyelele ekhanda lakho ngesithende (umlenze owodwa ngesikhathi) (ungacindezeli).
Ngokuma kwendololwane okufanayo, phakamisa umlenze wakho owodwa ngaphezu kwesinqe sakho ngenkathi uwugcina unwetshiwe, bese uwuhlikihla. Ngenkathi uphakamisa umlenze uphinde unwebe futhi uhlikihle. (umlenze owodwa ngesikhathi) (10-30)
Uthambekele, unezandla ngemuva kwekhanda lakho, ngenkathi ugcina imilenze yeluliwe futhi iqinile, phakamisa isifuba sakho phezulu. (20-60)
I-Supine, nezandla ngemuva kwekhanda lakho, kuyilapho ugcine imilenze yeluliwe futhi iqinile, phakamisa isifuba sakho phezulu, uthinte ngendololwane yakho eyodwa kwelinye idolo. (20-60)
I-Supine, nezandla ngemuva kwekhanda lakho. Ukuqala ngemilenze enwetshiwe, yiphakamise ngesikhathi esifanayo futhi uyifake esifubeni sakho. (10-30)
I-Supine, enezandla ngemuva kwekhanda lakho, noma izingalo ezinwetshiwe futhi ziphansi, phakamisa imilenze yakho yomibili ohlangothini olulodwa (kancane ngakwesobunxele noma kwesokudla), ngenkathi uyigcina yeluliwe. Phakamisa kuze kube yilapho imilenze yakho nomzimba wakho ongaphezulu kwakha i-engeli eqondile (ungacindezeli). (3-9)
I-Supine, nezandla ngemuva kwekhanda lakho imilenze igobe iqonde esifubeni sakho, phakamisa isifuba sakho futhi ufinyelele ngendololwane eyodwa kwelinye idolo elishintshanisa izindololwane namadolo.
Umyalelo engiwubhalile yilowo engiwusebenzisa phakathi neseshini, nokho ngingahle ngiqede iseshini nge-aerobic (ngemuva kokuzivocavoca kwesisu), ngokuvamile ufuna ukuqeda ngokuzelula okuthile, ngakho-ke kulokhu imikhuba yami akufanele ituswe. . Isikhathi sonke ngokuvamile sithatha cishe isigamu sehora, akuvamile ukuba yimizuzu engama-45.
Khumbula ukuthi ukuvivinya umzimba kusiza ngesimo semizwa, umfutho wegazi, ukuqunjelwa, isiyezi ngenxa ye-oksijini ephansi nezinye izinto...ngakho-ke kubaluleke kakhulu futhi kuyindlela ehlukile kunezinye izinhlobo zemithi eqondile.
Khetha ukuzivocavoca esikhundleni samaphilisi uma ukwazi.
Novemba 06, 2021